Bindu uye maruva emukati - Bougainvillea kana Bougainvillea Art sens - mazano eimba nebindu
Bindu uye maruva emukati - Bougainvillea kana Bougainvillea
06.03.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Imwe yemaruva akanaka kwazvo ebindu - Bougainvillea kana Bougainvillea ndudzi yekuSouth America - kubva kuBrazil kuenda kuPeru uye kumaodzanyemba kweArgentina. Yakatumidzwa zita remuFrance murume anonzi Louis Antoine de Bougainville, uyu mumiriri anoshamisa emafashama akakunda akakunda nyika kwenguva pfupi. Iri mumhuri Nyctaginaceae, bougainvillea inozivikanwa zvakare nemamwe mazita akawanda seGurambilia, Buganville, Santa Rita, Napoleon, Trinitaria, Papellillo, nezvimwewo, uye kumusha kwayo inonzi Primavera. Parizvino, vanyori vakasiyana vanogashira kuvapo pakati pemhando dze4 ne18 mudhi, uye dzakasiyana dzakasiyana dzinonetsa kuongororwa dzinozivikanwa pamusoro pe300 dzakapihwa mharidzo dzakawandisa dzezvizvarwa zvakasiyana zveiyo mahybrids. Muchokwadi, iwo mavara akanaka eichi chakakomberwa gwenzi kana muti hausi maruva asi mabhuroka. Maruva chaiwo akavanzwa pakati pe mabhuroka.
Kurimwa kweBougainvillea ibasa rakaoma pakati uye kunoenderana zvakanyanya nemamiriro ekunze enzvimbo kwainoitika, asi mwero wekuvandudzwa kwemarudzi akasiyana unosimuka kubva pakupera kusvika nekukurumidza. Munzvimbo dzakaenzana, simiti ino tumbuka gore rese, uye kumwe kwese kune mwaka, nekuyerera kunoyerera pakati pe 4 ne 6 mavhiki. Iyo Bougainvilleas inokwezva zvakanyanya kune vateveri ve bonsainekuti vanochinjika nyore uye nokudaro, uye nenzira yakafanana vanogona kukura se maruva eimba neruva rakanaka kwazvo mumatsime.
Izvi zvinomera zvinoda zuva uye kudziya. Kana tembiricha ikadzika pasi pe10-12 degrees uye iyo Bougainvillea iri mubindu, inguva yekuikohwa iyo mukati uye mosekesa - kana tembiricha shoma asara pamusoro pe15-16 degrees, chirimwa chingangodzokera kubindu zvakare. Ivhu rinofanirwa kuve rakanyoroveswa. Kusimudza zvine mwero zvinoshanda zvakanaka, asi zvakawandisa zvinokanganisa mashizha mashoma kwete mavara akanaka.
Kudiridza kwakanakira kuwedzera zvishoma munaFebruary uye Kurume kukurudzira kukura, uye muchikamu chakajeka chezuva zvakare zvakanaka kuchengetedza humidity yakakwirira, iyo inobatsira budding. Pakazosvika pakati paApril, apo chirimwa chiri kutokura zvishoma nezvishoma, kudiridza kunogona kuita nguva nenguva sekufeterwa. Hatizotaure nekuti, sezvatambotaura, mhandara dzakasiyana siyana uye huwandu hweimwe hwese hwasiyana. Nokukurumidza mabhurashi paakaratidza ruvara, zvinokurudzirwa kuendesa Bougainvillea kunzvimbo inotonhora pasina kuenderera mberi kwakananga kwezuva (iyo inonzi mumvuri ruvara), iyo ichabatsira kukura uye kuchengetedza iwo akanaka mabhurashi nguva refu. Neiyo shanduko yakadaro, mashizha ari anogona kusunungurwa panguva yemhepo-yekumisa uye kudiridza kunofanirwa kuvezwa mukati menguva ino.
Kana mabhureki achinge adonha, zvakanaka kuva nefetiraiza neitrogen fetiraiza wechipiri kuyerera. Kana maruva apera (kazhinji munaGunyana), kudiridza kweBougainvillea kunodzvanywa kusvika mazuva maviri mumutsetse uye fetiraiza ndokumira. Kubva munaNovember, kudiridza kunofanirwa kunge kusiri kushoma asi kwakawanda.
Bougainvillea, Bougainvillea, bindu, minda ine maruva, maruva ebindu, mazano ebindu rine maruva, mazano emaruva, maruva akanaka, maruva akanaka ebindu, kutenderera mumayadhi, maruva anokambaira zvebindu, maruva, maruva ebindu, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Kwekushongedza bhiriji yebindu
Pfungwa nyowani uye inonakidza yekuisa bhandi padanda mubindu sekushongedza. Attache ...
Breathtaking Monastero Santa Rosa Hotera muItaly
Iyo inoshamisa Monastero Santa Rosa Hotel chivakwa cheichimbova monastery yeXV ...
Bindu pallet swing
Mushure mekutaurika huwandu hwepfungwa pamaitiro atinogona kushandura mapasuru ekare uye asinganeti ...
Matai ebindu akagadzirwa nemateya ekare
Kugadzira mabindu madhiri kubva kumateya ekare ibasa rinonakidza basa ...
Diki, yakanaka, yakagadzikana
Pamwe mumwe nemumwe wedu dzimwe nguva anombofungidzira kuti imba yekurota ingaratidzika sei. Heuno muenzaniso ...